Arabo (vahoaka) : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Arabo (vahoaka) : Fahasamihafan'ny versiona roa
Arabo (vahoaka) (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Septambra 2021 à 18:52
2 581 octets ajoutés , il y a 2 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Septambra 2021 à 18:51 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 2 Septambra 2021 à 18:52 (hanova) (esory)
== Ny fiteny arabo ==
Ny [[fiteny arabo]] dia [[fiteny semitika]] tenenina ao avaratr' i [[Afrika]] sy any [[Azia Andrefana]]. Raha atambatra ny olona miteny arabo eo amin' ny firenena rehetra izay lazaina fa miteny arabo ôfisialy, dia eo amin' ny 240&nbsp;000&nbsp;000 eo ho eo. Ny boky masin' ny [[silamo]], ny [[Kor'any]], izay nosoratana tamin' ny teny arabo, no manome lanja io fiteny io eo anivon' ny vahoaka mozilmana eran-tany. Samihafa ny fiteny arabo an-tsoratra sy ny fiteny arabo tenenina.
== Ny fivavahan' ny Arabo talohan' ny silamo ==
Ny [[fivavahana tao Arabia talohan' ny fivavahana silamo]] dia nahitana [[fivavahana]] amin' andriamanitra maro, fisafidianana andriamanitra iray amin' ny maro hivavahana, ny [[fivavahana kristiana]], ny [[jodaisma]] ary [[fivavahana iraniana]] maro. Nisy koa ireo fivavahana hafa izay tsy dia be mpanaraka.
=== Ny pôliteisma sy ny henôteisma arabo ===
I Hubal no andriamanitra lehibe indrindra sady rain' ny andriamani-bavy telo (Al-Lāt, Al-‘Uzzá, Manāt). Ny sarivongan' i Hubal dia nitsangana tao akaikin' ny Kaaba ao amin' ny tanànan' i [[Maka (any Arabia Saodita)|Maka]]. I Al-Lāt dia nivavahan' ny Arabo tao Maka, izay nanaovany sarivongana vato tao Taif. I Al-‘Uzzá dia andriamani-bavin' ny fahavokarana, nivavahana tao Maka koa, izay ninoana fa miaro sady miantoka ny fandresena amin' ny ady ifanaovany amin' ny firenena na foko hafa fahavalony. I Manāt no andriamanitry ny vintana, izay nanana sarivongana tao akaikin' i al-Mushallal any Qudayd, eo anelanelan' i Medina sy i Maka.
=== Fivavahana abrahamika ===
Ny [[Nestorianisma|kristianosma firehana nestoriana]] dia hita tao avaratra-atsinanana sy tao amin' ny [[Helodrano Persika]]. Ny nestorianisma dia fampiam-pinona izay milaza fa misy [[Persôna (teôlôjia)|persôna]] sy [[Natiora (teôlôjia)|natiora]] roa miara-misy ao amin' i [[Jesoa Kristy]] ka ny voalohany persôna sy natiora araka an' Andriamanitra fa ny faharoa dia persona sy natioran' olombelona.
Ny [[Saikanosin'i Arabia]] dia nandray koa ireo [[Jiosy]] mpifindra monina hatramin' ny [[Empira Rômana|Vanimpotoana Rômana]], izay nampian' ireo mponina tompon-tany niova ho amin' ny [[jodaisma]].
=== Ny fivavahana iraniana ===
Ny zôrôastrisma dia hita tao amin' ny tapany atsinanana sy atsimon' i Arabia. Toraka izany koa ny mazdakisma sy ny manikeisma. Ny [[zôrôastrisma]] dia fivavahana [[Monoteisma|monoteista]] manao an'i [[Ahora Mazda]] no anaran’ ny andriamaniny sady manindry mafy ny fifanoheran’ ny herin’ ny tsara amin’ ny herin’ny ratsy ([[Doalisma (finoana)|doalisma]]). Ny [[mazdakisma]] dia fivavahana [[Gnôstisisma|gnôstika]] mananandratra ny fananana iombonana; inoany ny fisian' ny foto-javatra roa mifanohitra: ny [[Tsara]] (Fahazavana) sy ny [[Ratsy]] (Haizina). Ny [[manikeisma]] dia fivavahana fifangaroan' ny zôrôastrisma sy ny [[bodisma]] ary ny [[kristianisma]]; izay mampianatra ny fizaràny izao rehetra izao ho roa (doalisma), ahitana ny fanjakan' ny Tsara, izay anjakan' Andriamanitra, sy ny fanjakan' ny Ratsy, izay anjakan' i [[Satana]].
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1037126"